Moa ve misy fomba faran'izay haingana hampiakatra ny PageRank miaraka amin'ny backlinks?
Misy teti-bola maromaro amin'izao fotoana izao izay azo ampiasaina amin'ny fampiakarana ny PageRank rehetra amin'ny tranokalan'ny tranokala na blôgy miaraka amin'ny backlinks. Ary alohan'ny hanombohanay, avelao hiatrika izany - tsy afaka mamorona amin'ny "backlinks" ara-bakiteny ny "PageRank" efa misy anao ianao, na dia sarotra na mahomby aza izy ireo. Mazava ho azy, ny pejin-kevitry ny backlink dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra amin'ny lanjany lehibe indrindra rehefa misy fiantraikany mahasalama izay mamaritra ny tenimiafin'ilay tranonkala. Anisan'ireo hevi-dehibe hafa noeritreretin'ireo fitaovam-pikarohana lehibe toa an'i Google, ireto manaraka ireto: mety mamela ny tenan'izy ireo, ny teny fototra fototra, ny votoatiny tsy manam-paharoa, ary ny sisa amin'ireo tranonkala izay tsy dia mavitrika loatra ao amin'ny SEO. Miverina eto amin'ny teboka - tsy azo atao ny manatsara avy hatrany ny PageRank amin'ny backlinks. Saingy mbola azo tanterahina ilay asa, raha toa ianao ka vonona sy vonona hiara-miasa amim-paharetana amin'ny tetikadinao maharitra. Ireto ambany ireto angamba no fomba mety indrindra hampiasana ny rindrankajy izay mety hitondra anjara biriky amin'ny pejinao ambony indrindra ao amin'ny Google.
Ary avelao aho hanome anao ny teny farany amin'ny fampitandremana - aza manandrana manandrana PageRank miaraka amin'ny automation backlinks. Noho izany, izao no tokony ho heverina ho voalohany sy lehibe indrindra:
Mifantoka bebe kokoa amin'ny Quality, fa tsy Quantité
Ny hevitra fototra mahatonga ny liona anjara amin'ny paikady SEO dia milefitra amin'ny kalitao fotsiny. Raha tsorina, ny tanjona manerantany amin'ny SEO dia ny hanatratra vokatra maharitra sy maharitra ho an'ny fampiroboroboana amin'ny aterineto amin'ny SERPs. Mampalahelo fa be loatra ny mpamaham-bolongana sy ny webmasters amin'ny aterineto no miatrika olana amin'ny fanorenana tranokala. Ny tiako holazaina dia matetika izy ireo no manome loha laharana ny habetsahana, amin'ny fanantenana antenaina fa ny fandao ny kitapo goavana goavana any dia hampitombo ny isan'ny tarika ankapobeny. Saingy diso izy ireo satria tsy misy dikany ho an'ny tanjona SEO ireo rohy ambany na tsy misy dikany. Raha ny marina, misy ny vintana ambony kokoa hahazoana ny sazy henjana kokoa, fa tsy fandrosoana. Amin'ny toe-javatra ratsy indrindra dia mety hitranga avokoa ny zava-drehetra miaraka amin'ny fandraràna tsy tapaka ny fikarohana.
Fifandraisana amin'ny niche na orinasa orinasa
Aza manao io fahadisoana mahatsiravina io, toy ny efa nataoko taona maro lasa izay. Raha ny tena izy, dia nanao ny lalan-diso aho mba hahazoana rohy mankany amin'ny blôgiko - izay mifandray amin'ny tranonkala toa azo itokisana ihany no hitako mendrika ny hiatrehana. Noho izany, ny ankamaroan'ny raketako vaovao noforonina dia tsy nahitana ny heviny manokana - raha ny marina dia tsy ny rehetra no noforonina tao anatin'io nosy marina. Vokatr'izany, nandany fotoana be sy ezaka goavana aho - mba hahasorena ahy tsy manana tombony amin'ny pejy PageRank avy amin'ny backlinks. Izany no antony, alohan'ny hidirana amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fifanakalozan-kevitra, dia manoro hevitra mafy aho amin'ny fanamarinana indroa fa ny loharanom-pifanerena dia natokana tanteraka amin'ny orinasa na hijanona ao anatin'ny indostrian'ny orinasa.
Mitandrema amin'ny fikarohana lalindalina kokoa amin'ny fitazonana ny lanjan'ny vokatra tsara
Tsara, tsy ilaina ny milaza fa ny votoaty dia ny mpanjaka. Ny momba ny SEO dia mamaky ara-bakiteny ny fisafidianana ny teny fototra sy ny fanadihadiana mety amin'ny semantika. Toy izany koa ny piraofilina rehetra ao amin'ny pejin'ny tranonkalanao, na ny fehezanteny momba ny fehezanteny mba hazava kokoa. Indrisy anefa fa ny fomba fanao mitovy amin'ny fikarakarana fikarohana lalindalina kokoa dia matetika loatra no tsy raharahiana. Izany no antony handinihan-kevitra ny hanoratanao ny vatofantsika fanamafisana araka izay azo atao - farafaharatsiny mampiasa AdWords na ireo fitaovana fikarohana fikarohana hafa manan-danja kokoa. Amin'izany fomba izany, dia hanome toky ny amin'ny fifandraisana tsy mendrika ianao noho ny tsy fisian'ny lazany amin'ny fikarohana. Ataovy izay hahazoana antoka fa mahitsy ianao ary manaraka ireo fironana goavana sy ireo sehatra samihafa. Tadidio fa misy litera roa amin'ny endriny roa mitovy amin'io dia afaka manome rohy miaraka amin'ny hery tsy mivoatra azo avy amin'ny fifamoivoizana, ary noho izany dia hisy fiantraikany amin'ny PageRank amin'ny endriny Source .